ဒူဘိုင်းသည်ငယ်ရွယ်သောမိသားစုများအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာလား။ | အလုပ်များ - အလုပ်ရှာဖွေရေး - ခရီးသွားလာကြည့်ပါ။ ကြည့်ရှုပါ။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ - Young ကမိသားစုများအတွက်ဒူဘိုင်းအဆိုပါစံပြကံကြမ္မာပင်ဖြစ်သည်
ဒူဘိုင်း Young ကမိသားစုများအတွက်အဆိုပါစံပြကံကြမ္မာပင်ဖြစ်သည် ?. ဒူဘိုင်းကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်လာ, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင့်တစ်ဦးစိုက်ပျိုးမှုကိုလက်ခံရရှိ, အတိတ်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတစ်ဦးလျင်မြန်စွာအသွင်ကူးပြောင်းမှုခံထားပါတယ် အနီးကပ်မှ 8 သန်းပြည်ပရှိလူဦးရေ 2013 ၏အဖြစ်။ တမြို့လုံးကိုဆက်ကပ်ဖို့ရှိပါတယ်အံ့ဖှယျအကြိုးကြေးဇူးမြားအပေါငျးတို့သပေးသောကြောင့်လက်ခံရရှိခဲ့သည် အလုပ်လုပ်ပညာရှင်များအနေဖြင့်ကြီးထွားလာနေသောအကျိုးစီးပွား နှင့်လူငယ်မိသားစုများကြောင်းစုံလင်သောအလုပ်ကိုဘဝချိန်ခွင်လျှာဒဏ်ခတ်ခြင်းငှါရှာကြံ။ ဒီခေတ်သစ်အလယ်တန်း-အရှေ့ပိုင်းတည်နေရာပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားမိဘများအတွက်, မြို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ, ဒါပေမယ့်လည်းသားသမီးတို့အဘို့မပေးရုံပူဇော်ဖို့အများကြီးရှိပြီးတစ်မိသားစုပြုစုပျိုးထောင်။
ဒူဘိုင်းကလေးသည်-ဖော်ရွေလှုပ်ရှားမှုများရန်မလူစိမ်းသည်နှင့်တစ်ပျော်စရာမိသားစုတစ်နေ့တာထွက်ဘို့ options အမျိုးမျိုးတှေအမြားကွီးပါပဲ။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးပူနွေးသောအပူချိန် ကမ်းခြေမှာတနင်္ဂနွေအမြဲတစ်ခု option ကိုဖြစ်ကြောင်းဆိုလို, သို့မဟုတ်သင်ပိုစွန့်စားဘက်မှာခံစားနေလျှင်, သင်ဒူဘိုင်းရဲ့အဆမတန်ကြီးမားရေပန်းခြံတွေထဲကတစ်ဦးအလည်အပတ်နှင့်အတူနေရောင်ခြည်၏အရှိဆုံးစေနိုင်သည်, 'Aquaventure' သို့မဟုတ် '' တောရိုင်း Wadi '' ။ နွေရာသီလအတွင်း, သင်ကဲ့သို့သောအချို့သောမိုးလုံလေလုံလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူဆင်းအအေးလိုပေမည်
ဒူဘိုင်းရဲ့တစ်ခုမှာ အသစ်ကမိုးလုံလေလုံ Trampoline ပန်းခြံ အားလပ်ရက်စခန်းများ, မွေးနေ့ပါတီအဆောက်အဦနှင့်မိသားစု packages များပူဇော်ရာသို့မဟုတ် 'ဘောင်း', 'ဒူဘိုင်းထဲက Flip' 'အပါအဝငျ။ ဒူဘိုင်းပြတိုက်ဒူဘိုင်းအရှည်ဆုံးရပ်နေသည်ကိုရိုးရာအဆောက်အဦးများထဲကတစ်ခုအတွင်း၌တည်ရှိသောစိတ်ဝင်စားဖွယ် "Origins အာရေဗျ၏" ပြပွဲနှင့်အတူအခြားအကြီးအ option တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဒူဘိုင်းအတွက်ကျောင်းစနစ်ကနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများကယ်တင်တတ်၏ ပညာရေးနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပြည်ပရှိအုပ်စုများ၏ဒေသများထံမှအမျိုးသားသင်ရိုးညွှန်းတမ်းပစ္စည်းကို အသုံးပြု. လည်ပတ်ရသောပြည်ပရှိကျောင်းများ၏မြင့်မားသောအရေအတွက်ကပါဝင်သည်။ အမေရိကန်အနေဖြင့်သူတို့အားအမေရိကန်နှင့်ညီမျှမှာသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကျောင်းအပ်နိုင်နေချိန်တွင်ဒါကြောင့်ဥပမာအားဖြင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံကနေပြောင်းရွှေ့ကျွမ်းကျင်သူများ, ဗြိတိန်အမျိုးသားသင်ရိုးညွှန်းတမ်းသွန်သင်ပေးသောကျောင်းရှာအံ့သောငှါနိုင်ဘူး။ ဤနည်းအားဖြင့်သားတို့သည်မိမိတို့နေအိမ်နိုင်ငံများတွင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ပညာရေး၏မြင့်စံချိန်စံညွှန်းကိုစှနျ့လှတျဖို့မရှိဘူးနှင့်၎င်းတို့၏ရွယ်တူအိမ်ပြန်ဆုံးမသွန်သင်ကြသည်တူညီတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်။
ဒူဘိုင်းအလားတူအရွယ်အစားနှင့်လူဦးရေရဲ့မြို့ကြီးများမှဆွေမျိုးနိမ့်ဆုံးရာဇဝတ်မှုနှုန်းများထဲမှဝါကြွားခြင်းဟာအလွန်လုံခြုံသောမြို့ဖြစ်၏။ အကြောင်း, ဒါပေမယ့်တစ်ဖွဲ့လုံးကယူအေအီးဘယ် '' အညီသွားရောက်ကမ္ဘာ့ဒုတိယအလုံခြုံဆုံးတိုင်းပြည်အဖြစ်အဆင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်မသာ? မိဘများမြို့များကိုနိုင်ငံတွေကိုခရီးလှသည့်အခါသူတို့မိသားစုများနှင့်အတူလုံခြုံသလိုခံစားရတယ်ကြောင်းသတင်းပို့အတူ '' ခရီးသွားခြင်း။
ယေဘုယျအားဒူဘိုင်းပျော်စရာမိသားစုလှုပ်ရှားမှုများအနေဖြင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ပညာရေးမှလူငယ်အလုပ်လုပ်ပညာရှင်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ပူဇော်ဖို့ကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏရှိပါတယ်။ သင်သည်သင်၏မိသားစုမြှင့်နှင့်သင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးဖို့ဦးတည်ရာကိုရှာနေခဲ့လျှင်, ဒူဘိုင်းရုံရာအရပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, ကျိန်းသေအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကမိသားစုဘဝတစ်စုံလင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အခါသင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသင့်ကိုယ်သင်မေးကြည့်ပါ။ Young ကမိသားစုများအတွက်ဒူဘိုင်းအဆိုပါစံပြကံကြမ္မာပင်ဖြစ်သည် ?, ဟုတ်ကဲ့ဒီမြို့နှင့်အနည်းငယ်အခြားနိုင်ငံများမှလည်းအခြေချနေထိုင်သင်၏အသက်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအဘို့အကအရမ်းဖော်ရွေဖြစ်ကြသည်။ ထိုအခါယူအေအီးသင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအခြေချရန်ရှာနေလျှင်ပြီးပြည့်စုံနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။